सरकारले उठायो हात ! अब संक्रमितको उपचारको खर्च पनि सरकारले नबेहोर्ने « Etajakhabar
सरकारले उठायो हात ! अब संक्रमितको उपचारको खर्च पनि सरकारले नबेहोर्ने
प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०७७, आईतवार १९:३४
काठमाडौ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकार भने जिम्मेवारीवाट पन्छिदै जान थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण र उपचार सरकारले नभई स्वयं व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बैठकले अब संक्रमितको परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले अति अपांगता, जेष्ठ नागरिक, सरसफाइकर्मी , सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीहरुको मात्र उपचार र परिक्षण खर्च बेहोर्नेछ । अन्य सर्वसाधारणहरुले भने परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।
मन्त्रालयको आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता गौतमले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ को बैठक अनुसार उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए।
उनले अति अपांगता, जेष्ठ नागरिक, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिने जानकारी दिए। उल्लेखित व्यक्तिले कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण तथा उपचार खर्च बिमाबाट गरिने निर्णय भएको उनले जनाकारी दिए।
सन्तको ह’त्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
नवलपरासी । नवलपरासीमा हत्या गरिएका सन्तको ह’त्या’रालाई कारबाहीको माग गर्दै विश्व हिन्दू परिषद, नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई
काठमाण्डौ । नेपालकालागी चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाली गीत गाएर दशैंको शुभकामना दिएकी छन् ।
चीनको एक शहरमा एक जना कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि पुरै सहरबासीको नै पीसीआर गरिँदै
एजेन्सी । चीनले सिन्जियाङ् प्रान्तको काशगार शहरका झण्डै ४७ लाख मानिसको एकैपटक कोरोना परीक्षण गर्ने
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १९:२४
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १९:०९
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १९:०५
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १८:४८